(UPDATE) CDC waxay soo saartay farriin degdeg ah oo loogu talagalay qof kasta oo Mareykan ah oo lagu tallaalay Pfizer
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » (UPDATE) CDC waxay soo saartay farriin degdeg ah oo loogu talagalay qof kasta oo Mareykan ah oo lagu tallaalay Pfizer
Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Mareykanka Biden iyo xirfadleyda caafimaadka ee Mareykanka waxay lahaayeen ogeysiisyo kala duwan oo ku saabsan tallaalka xoojinta COVID-19 ee saddexaad Maanta Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Mareykanka ayaa soo saartay talo sax ah oo loogu talagalay tallaalka xoojiyaha maanta, ugu yaraan Pfizer tallaal.
UPDATE: Cusboonaysiinta Shot Shot ee Moderna iyo Johnson Johnson ayaa la daabacay maanta.
Riix halkan si aad u akhrido.
Maanta, Agaasimaha CDC Rochelle P. Walensky, MD, MPH, ayaa taageeray Guddiga La-talinta CDC ee Talaabooyinka Talaalka '(ACIP) ee tallaalka xoojiyaha ah ee tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 ee dad gaar ah wuxuuna sidoo kale ku taliyay in la kordhiyo qiyaasta kuwa ee ku jira goobaha shaqada iyo hay'adaha ee khatarta sare leh.
Ogolaanshaha Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) iyo hagida CDC ee adeegsiga ayaa ah tillaabooyin muhiim ah oo horay loo qaaday maadaama aan ka shaqeyneyno inaan ka sii horreyno fayraska oo aan nabadgelyada Mareykanka ilaalino.
Tilmaamahan ku-meel-gaarka ah ee la cusbooneysiiyay ee CDC wuxuu u oggolaanayaa malaayiin Mareykan ah oo halista ugu badan ugu jira COVID-19 inay helaan Pfizer-BioNTech COVID-19 tallaal xoojinaya si ay gacan uga geystaan ​​kordhinta ilaalinteeda.
CDC waxay ku talineysaa:
dadka jira 65 sano iyo ka weyn iyo dadka deggan goobaha daryeelka muddada-dheer waa in hel tallaalka xoojiyaha ee Pfizer-BioNTech COVID-19 ugu yaraan 6 bilood ka dib taxanahoodii koowaad ee Pfizer-BioNTech,
dadka da'doodu u dhaxayso 50-64 sano xaaladaha caafimaad ee salka ku haya waa in hel tallaalka xoojiyaha ee Pfizer-BioNTech ee COVID-19 tallaalka ugu yaraan 6 bilood ka dib taxanahoodii koowaad ee Pfizer-BioNTech,
dadka da'doodu u dhaxayso 18-49 sano xaaladaha caafimaad ee salka ku haya waxaa laga yaabaa hel tallaalka xoojiyaha ee Pfizer-BioNTech COVID-19 ugu yaraan 6 bilood ka dib taxanahoodii koowaad ee Pfizer-BioNTech, oo ku salaysan faa'iidooyinkooda iyo khatartooda shaqsiyeed, iyo
dadka da'doodu u dhaxayso 18-64 sano kuwaas oo halis ugu jira soo-gaadhista iyo gudbinta COVID-19 sababta oo ah goob shaqo ama hay'ad waxaa laga yaabaahel tallaalka xoojiyaha ee Pfizer-BioNTech COVID-19 ugu yaraan 6 bilood ka dib taxanahoodii koowaad ee Pfizer-BioNTech, oo ku salaysan faa'iidooyinkooda iyo khataraha shaqsiyeedkooda.
Qaar badan oo ka mid ah dadka hadda u -qalma in la siiyo tallaal xoojin ah ayaa qaatay tallaalkooda bilowga hore ee barnaamijka tallaalka waxayna ka faa'iideysan doonaan ilaalin dheeraad ah. Iyada oo awoodda kala duwanaanshaha Delta ay tahay sida cadaadiska wareegaya iyo kiisaska COVID-19 oo si weyn ugu sii kordhaya Mareykanka oo dhan, tallaal xoojin ah ayaa gacan ka geysan doona xoojinta ka-hortagga cudurrada daran ee dadkaas halista ugu jira soo-gaadhista COVID-19 ama dhibaatooyinka cudur daran.
CDC waxay sii wadi doontaa la socodka badqabka iyo waxtarka tallaalada COVID-19 si loo hubiyo talooyinka habboon si loo ilaaliyo dhammaan dadka Mareykanka ah. Waxaan sidoo kale ku qiimeyn doonnaa xog la heli karo oo degdeg ah toddobaadyada soo socda si aan si deg -deg ah ugu soo jeedinno talooyin dheeraad ah dadka kale ama dadka qaatay tallaallada Moderna ama Johnson & Johnson.
Dr. Walensky wuxuu yiri:
Anigoo ah Agaasimaha CDC, waa shaqadayda inaan garto meesha ficilladeennu ku yeelan karaan saamaynta ugu weyn. CDC ahaan, waxaa naloo xilsaaray falanqaynta xogta adag, inta badan aan dhammaystirnayn si loo sameeyo talooyin la taaban karo oo wanaajinaya caafimaadka. Faafida, xitaa iyada oo aan la hubin, waa inaan qaadnaa tallaabooyin aan filayno inay samayn doonaan wanaagga ugu weyn.
Waxaan aaminsanahay inaan sida ugu wanaagsan ugu adeegi karno baahiyaha caafimaadka guud ee qaranka annagoo siineyna qiyaaso xoojin ah oo loogu talagalay dadka waayeelka ah, kuwa ku jira xarumaha daryeelka muddada-dheer, dadka qaba xaalado caafimaad oo hoose, iyo dadka qaangaarka ah ee halista weyn ugu jira cudurrada ka imanaya shaqooyinka iyo hay'adaha illaa COVID-19 . Tani waxay la jaanqaadeysaa oggolaanshaha xoojinta ee FDA waxayna ka dhigeysaa kooxahan inay u qalmaan tallaalka xoojiyaha. Maanta, ACIP waxay kaliya dib u eegtay xogta tallaalka Pfizer-BioNTech. Waxaan wax ka qaban doonaa, isla dareenka deg -degga ah, talooyinka loogu talagalay tallaallada Moderna iyo J&J isla marka xogtaas la helo.
In kasta oo tallaabada maanta ay ahayd tallaabo hore oo la xiriirta tallaalada xoojinaya, haddana kama jeedin doonto diiraddayada ugu muhiimsan ee tallaalka aasaasiga ah ee Mareykanka iyo adduunka oo dhan. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo ACIP dooddooda fekerka leh iyo ka -baaraan -degga cilmiyeed ee ku saabsan xogta hadda jirta ee ogeysiisay taladayda.
Teresa Crawford wuxuu leeyahay,
September 25, 2021 at 17: 53
SMH… Waxaan qaadanayaa waqti aan kaga jawaabo qiimayaashan !!! Waxaan qiyaasayaa in tallaalku uusan gaarin geeridii ugu dambaysay sidii la qorsheeyay…
Markaa, saxafiyiinta been abuurka ah waa inay riixaan sheekadan nacasnimada ah ee tag hel xoojiyaha! Runtii waa wax laga xumaado in la arko dad aad u badan oo lagu khiyaanay rumaynta beentaas!
Riwaayad wuxuu leeyahay,
September 25, 2021 at 14: 26
Haa sax. Waxaan ku dhowahay inaan ku rumaysto.
Kathy Ward wuxuu leeyahay,
September 25, 2021 at 10: 20
Ma heli kartaa xoojiye Pfizer haddii aad qaadatay tallaalka moderna